Chess Nepal !!!: 2012
By: Umesh KC at Friday, October 05, 2012 No comments:
फिडेमास्टर अमिनुल इस्लामलाई माउन्ट गौरीशंकर अन्तराष्ट्रिय बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उपाधि
माउन्ट गौरीशंकर अन्तराष्ट्रिय बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उपाधि
बंगलादेशका फिडेमास्टर अमिनुल इस्लामलाई
चरिकोट असोज ३
माउन्ट गौरीशंकर अन्र्तराष्ट्रिय बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उपाधि जिल्ला सदरमुकाम चरिकोटमा संचालन भइरहेको माउन्ट गौरीशकर अन्तराष्ट्रिय खुल्ला बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उपाधि बंगलादेशी फिडेमास्टर इस्लाम इनामुलले जितेका छन् । प्रतियोगितामा अपराजित रहँदै ८ दशमलब ५ अंक जोड्न सफल २२६८ रेटेड इस्लामले बिहिबार सम्पन्न दशौं चरणको खेलमा नेपालका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठसँग बराबरी खेले । स्लामले नगद ३० हजार रुपैंया हात पारे । स्मरण रहोस् राजेन्द्रप्रसाद २ वर्षअघि चरिकोटमा सम्पन्न एनसीसी कपका विजेता हुन् ।
नेपालका फिडेमास्टर मनिष हमाललाई पराजीत गर्दै अस्ट्रेलियाका २४११ रेटेड अन्र्तराष्ट्रिय मास्टर अलेक्स्यान्डर वल ८ अंकका साथ दोश्रो स्थानमा रहे । त्यस्तै २३३२ रेटेड भारतका अन्र्तराष्ट्रिय मास्टर अतानु लाहिरीले पूर्व नेपाल च्याम्पियन शुरवीर लामालाई हराउँदै तेश्रो स्थानमा रहन सफल भए । फिडेमास्टर विलमलाल श्रेष्ठ, क्यान्डिडेटमास्टर केशव श्रेष्ठ, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ तथा बद्रीलाल नेपाली समान ७ दशमलब ५ अंक हासिल गर्दै चौथो देखि सातौं स्थानमा रहन सफल भए । दशौं चरणमा विलमलालले भारतका सौभीक चक्रवर्तीसँग बराबरी खेले भने केशवले मदनकृष्ण कायस्थलाई हराए । उता बद्रीलालले भारतका सौरभ आनन्दलाई पराजय चखाए ।
शुरवीर लामा, मनिष हमाल, भारतका अन्तरीप रोय तथा सौभीक चक्रवर्ती, ध्रुवतारा क्लब झापा नेपालका निरज निरौला, र ललितपुरका राजन पुरी समान ७ अंक हासील गर्दै आठौं देखी तेह्रौं स्थानमा रहे । त्यस्तै मिलन रोका, प्रकाश नेपाल, रविन्द्र श्रेष्ठ, कृष्ण थापा, सुरज पण्डित, आसिस राज तथा धिरव राजथला समान ६ दशमलब ५ अंकका साथ चौधौं देखी बीसौं स्थानमा रहे ।
अनरेटेडतर्फ भारतका आसुतोश कुमार तथा नारायण गाहा पहिलो तथा दोश्रो स्थानमा रहे । रेटिङ समूहतर्फ १९०० देखि २०९९ मा नेपालका मदनकृष्ण कायस्थ, १७५१ देखि १८९९ मा भारतका १० वर्षीय सौरभ आनन्द, १६०० देखि १७५० समुहमा भारतका अभिसेक सोनु तथा १६०० भन्दा मुनि नेपालका भरत धिमाल अब्बल रहे ।
उत्कृष्ट स्थानीय खेलाडीको पुरस्कार सेराओङजु शेर्पाले हात पारेभने दिपक दाहाल र बिक्रमध्वज श्रेष्ठ दोश्रो तथा तेश्रो स्थानमा रहे ।
नेपालका गणेशमान दुवालले भेट्रानतर्फको पुरस्कार हात पारे भने १० वर्षमुनि उमेर समुहमा भारत सिक्किमका राहुल गुरुङ उत्कृष्ट रहे । उता १३ वर्षमुनि उमेर समुहमा भारतका सोन्कालन भारती तथा १७ वर्ष उमेर समुहमा रौनक मण्डल पुरस्कृत रहे ।
महिलातर्फ भने भारतकी सीन्जीनी विश्वास र नेपालकी अनुसा पाण्डे सफल रहे । भाद्र ३० गतेबाट शुरु भएको प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश र अस्ट्रेलिया गरी ५ देशका १ सय २६ खेलाडीको सहभागीता रहेको थियो । कुल २ लाख २ हजार रुपैंया पुरस्कार राशि रहेको प्रतियोगिता जिल्ला बुद्धिचाल संघ तथा नेपाल चेस क्लब दोलखाले संयुक्त आयोजना गरेको हो ।
By: Umesh KC at Wednesday, September 26, 2012 No comments:
Place: Sailung Village Hotel, Charikot http://www.hotelsailung.com/
Organizer: District Chess Association, Dolakha
Left To Right: Govinda Shrestha(Secretary), Umesh KC(International Arbiter) & Hira Thokar(Co-ordinator)
By: Umesh KC at Tuesday, August 28, 2012 No comments:
We are very happy to inform you that the organizers has been increased the prize money as well as category of the prizes of Mount Gaurishankar International Open Chess Tournament, after re-schedule for September 15-20, 2012.
You can find the details on the above pages.
By: Umesh KC at Monday, August 13, 2012 No comments:
Mount Gaurishankar International Chess Tournament is going to postponed for few weeks....
We'll put the confirmed date as soon as possible....
By: Umesh KC at Sunday, August 12, 2012 No comments:
Dolakha District Chess Associan Office
By: Umesh KC at Saturday, August 11, 2012 No comments:
Memory of 2010 NCC Cup
Prize Winners & Organizers of 1st NCC Cup in 2010.
By: Umesh KC at Thursday, August 02, 2012 No comments:
Under Construction.....Keep Touching
By: Umesh KC at Wednesday, July 25, 2012 No comments:
फिडेमास्टर अमिनुल इस्लामलाई माउन्ट गौरीशंकर अन्तरा...